नेपाल आज | दशैंको टिकट खुलाउने तयारी, व्यवसायी निराश, गाडी नथपिने (भिडियोसहित)
अन्तरवार्ता भिडियो Breaking News अर्थ कभर स्टोरी
दशैंको टिकट खुलाउने तयारी, व्यवसायी निराश, गाडी नथपिने (भिडियोसहित)
मङ्गलबार, १७ भदौ २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
यसपटकको दशैंमा अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्नेबारे व्यवसायी नै अन्योलमा परेका छन् । यातायात व्यवसायी र सरकारबीच टिकट खोल्नेबारे बुधवारबाट छलफल हुने भएपनि त्यो सहमतिमा पुग्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार भाडा समायोजन लगायतका विषयमा सरकारसंग वार्ता हुँदैछ, त्यो टुंगोमा पुग्ने वित्तिकै टिकट खुल्छ, आत्तिनु पर्दैन ।
महासचिव सिटौला भन्छन्, ‘ जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि दशैंमा यात्रुलाई सहज रुपमा टिक उपलब्ध गराई सकुशल गन्तव्यमा पुर्याउनु हाम्रो कर्तव्य हो, त्यो हामी गर्छौं । विगतमा पनि गरेका हौं, अब पनि गर्छौं । त्यसअघि सरकारसँग केही छलफल गर्नुछ, ती विषय सल्टाएपछि टिकट खुल्छ । ’
तर, यसपटक चाडवाडको समयमा सवारीसाधनको भने चरम अभाव हुनेछ । सरकारले सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने भन्दै यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गराएपछि व्यवसायी निरुत्साहित भएका छन् । यसले गर्दा पुराना व्यवसायीले यो क्षेत्रमा लगानी गरेका छैनन् । उनीहरुले नयाँ बस किनेनन् । नयाँ व्यवसायी आउँदै आएनन्, जति आएका थिए, दुइ चार दिनको रमझम देखाएर हराए ।
अर्को कुरा तरलता अभावले पनि यातायात क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । बैकिङ क्षेत्रमा भएको तरलता अभावले पनि यातायात क्षेत्रमा लगानी आउन सकेन । यसो भएपछि कसैले पनि नयाँ गाडी खरिद गरेका छैनन् ।
अर्को समस्या भनेको वीमा नीति स्पष्ट छैन । हिजोको दिनमा समितिले नै बीमा सम्बन्धी सबै कुरा हेर्ने गर्दथ्यो, तर अब कम्पनीमा रुपान्तरण भैसकेपछि बीमा नीति स्पष्ट छैन । यस्तो अन्योलमा कसले नयाँ गाडी खरिद गर्छ ?
अझ सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्ने नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिए । उनीहरुको मान मर्दन गर्दै दिनुसम्म दुःख दिए । यसले गर्दा लगानीकर्ता हतोत्साहीत भए । व्यवसायीले नै यो क्षेत्र असुरक्षित ठानेपछि लगानी कसरी आउँछ ?
यसपटकको दशैंका नयाँ गाडी नथपिनुका कारण यीनै हुन् । महासचिव सिटौलाका अनुसार देशभरका ग्यारेज खाली छन् । यसपटक जम्माजम्मी करिब एकसय सवारीसाधनले लामो दुरीमा सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ ।
सिटौला भन्छन्, ‘ हामीलाई भाडा बढाउन खोजेको भन्दै कुप्रचार गरिएको छ । हामीले भाडा बढाउन खोजेका होइनौ, समायोजन मात्र खोजेको हो । २०६९ सालदेखि भाडाको समायोजन भएको छैन, सरकारले बैज्ञानिकरुपमा भाडाको समायोजन गरोस भन्ने हाम्रो चाहना हो । ’
‘नेपाल सरकारले यातायात व्यवसायीलाई जहिले पनि अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्यो । सवारी चलाउन पूर्वाधारका कुनैपनि काम सरकारले पूरा गर्दैन । देशभरका सडक तहसनहस छन् । सवारी चालक अनुमति पत्र दिन जहिल्यै झन्झट र किचकिच मात्र छ । एउटा स्मार्ट लाइसेन्स दिन एक वर्ष कुर्नपर्छ, के जात्रा हो यो ? अनि भन्नेबेला दुईवटा ड्राइभर राख भन्ने ? यातायात क्षेत्रका दर्जनौ कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । कुनैपनि कानून व्यवसायी मैत्री छैनन्, सरकारले पनि शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्न थालेपछि सार्वजनिक यातायात धाराशायी नभए के हुन्छ ?’ महासचिव सिटौलाको तर्क छ ।
सिटौला अघि भन्छन्, ‘ अहिले देशमा साझा यातायात भन्ने छ । यो साझाको दादागिरी चलेको छ । यसका संचालकको पहुँच सिंहदरवारका कोठाकोठामा छ । त्यही भएर साझाले आफूले रोजेका सुविधासम्पन्न र चल्तीका रुटमा अनुमति पाएको छ । अझै साझा घाटामा गयो भन्छन् । लाज लाग्दैन ? यस्तो पनि बिभेद सरकारले गर्न मिल्छ ? देशको नियम कानून सबैलाई बराबरी होइन ? साझा यातायातले हामीले जस्तो दुरदराजका सडकमा गाडी चलाएर सेवा दिन सक्छ ? चलाएर देखाओस म चुनौती दिन्छु । ’
अहिले बिभिन्न भारतीय गाडीहरु खुलेआम देशभर चलेका छन् । सिधा आउँछन् काठमाडौं ठमेल, न्युरोड, दरवारमार्ग लगायतका क्षेत्रबाट यात्रु बोक्छन्, लैजान्छन् । सरकार के हेरेर बसेको छ ? यही हो देशको यातायात नीति ?
यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गरी व्यवसायिक र सुविधासम्पन्न बनाउन अलग्गै यातायात मन्त्रालय बनाउन जरुरी छ । कुनै अर्को बिभाग हेर्ने मन्त्रालयसंग जोडेर राखिराख्ने हो भने नेपालको यातायात सेवा कहिल्यै सुध्रिने छैन ।